XOG RASMI AH: Dawladda Norway Iyo Itoobiya oo ku mashquulsan qorshe heshiis lagu dhex dhigayo Kenya & Somalia. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Dawladda Norway Iyo Itoobiya oo ku mashquulsan qorshe heshiis lagu dhex dhigayo Kenya & Somalia.
NAIROBI(P-TIMES) – Warar dhinac diblumaasiyadda oo ay heshay warbaahinta Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogeysaa in ay todobaadkan magaalada Muqdisho tageen wafdi ka socday dawladdaha Norway iyo Itoobiya, oo hadda dadaal badan ku bixinaya sidii loo xalin lahaa khilaafka xagga siyaasadda ah ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya.
Xogtu waxay sheegaysaa in wafdigan isku howlay sidii loo dhameyn lahaa xiisadda labada dhinac ay ku hormareen magaalada Muqdisho, si ay ula kulmaan Madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Wafdigu waxay la kulmeen 7dii bishan xili habeynimo ah Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo ay wada hadal kula yeeshaan xaafiiskiisa, kalana hadleen in la joojiyo dhammaan howlaha Shidaal barista iyo heshiisyada ay Soomaaliya saxiixayso eek u wajahan xeebaha lagu muransan yahay.
Ergadu waxay u bandhigeen Soomaaliya in ay doonayaan in xiisada labada dal lagu dhameeyo wada hadal rasmi ah oo ka dhaca magaalada Addis Ababa, iyadoo diirada la saaraya in la abuuro jawi xasilooni siyaasadeed oo mandiqada oo dhan gaarta.
In dacwadda Badda lagu dhameeyo wada hadal iyo isku tanaasul ayaa kamid ahaa arrimaha la soo qaaday, sidda ay sheegayaan xogaha soo gaaraya Warsidaha Puntlandtimes.com
Mr, Kheyre oo haysta dhalashada dalka Norway ayaa u sheegay wafdigan in ay dacwadda Baddu tahay mid ka horeysay dawladdiisa oo hortaala Maxkamadda ICJ, lagana sugayo go`aanka ay gaarto marka la gaaro waqtiga ku dhawaaqida.
Kenya ayuu sheegay in aysan waxba colaad ah kala dhaxeyn oo ay yihiin labo dal oo deris ah, oo aysan dhinacooda waxba dhib ah wadin, arrimaha diblumaasiyadda ee kacsana ay masuuliyadooda leedahay Kenya.
Xogta ay heshay Puntlandtimes, waxay daaha ka rogaysaa in ay dhinacyadu ugu dambeyn gaareen isfaham ku wajahan in mar kale lagu kulmo magaaladda Addis Ababa, isla markaasna dacwadda Badda iyo arrimaha labada dhinac looga wada hadlo, taas oo aan ilaa hadda la aqoon mawqifka dawladda Soomaaliya.